2x10 Podcast ee Actualidad iPad: Apple Music wuxuu ku yimaadaa Android iyo in ka badan | Wararka IPhone
2 × 10 Podcast ee Actualidad iPad: Apple Music wuxuu ku yimaadaa Android iyo in ka badan
Toddobaadkan ku jira barmaamijkeenna 'Podcast' waxaan uga hadlaynaa Apple Music iyo imaanshaheeda barxadda ay xafiiltamaan ee ugu weyn, Google. Android horay ayey codsi uga heysatay Google Play oo loogu talagalay Apple Music, waana la sugayaa sida ay tahay soo dhaweynta dadka isticmaala Android ee adeegga muusikada Apple. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay daahfurka iPad Pro iyo fashilka filimka Steve Jobs.
Dhageyso »2 × 10: Apple Music wuxuu u imanayaa Android» Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 2 × 10 Podcast ee Actualidad iPad: Apple Music wuxuu ku yimaadaa Android iyo in ka badan
Khariidadaha Google ayaa kuu oggolaan doona inaad soo dejiso oo aad qadka ka baxdo
Swiftkey waxaa lagu cusbooneysiiyay emojisyada cusub ee iOS 9.1